दमकमा कोरोनाको संक्रमण बढ्याबढ्यै तर बजारमा छैन कुनै स्वास्थ्य सावधानी, भाग्य भरोसामा स्वास्थ्य सुरक्षा ! - Sawal Nepal
दमकमा कोरोनाको संक्रमण बढ्याबढ्यै तर बजारमा छैन कुनै स्वास्थ्य सावधानी, भाग्य भरोसामा स्वास्थ्य सुरक्षा !
काठमाडाैं विष्णुप्रसाद पोखरेल २०७७ कार्तिक २०, १८:५९
दमक/ झापाको दमकमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको भएतापनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कार्य भने कम भएको छ । उद्योगी, ब्यवसायी तथा कतिपय सामाजिक अगुवाहरुले लकडाउन गर्नु नहुने र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पसल ब्यवसाय नियमितता दिनु पर्ने बताएपनि यस्तो भएको पाईदैन ।
दमक नगरपालिकामा केहिदिन अघि भएको छmलफलमा पनि अधिकतम रुपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर ब्यपार ब्यवसाय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले पसलहरु अगाडि न हाँत धुने पानीको राम्रो ब्यवस्था रहेको छ न सबै पसलमा ह्याण्ड सेनिटाइजर नै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
दमक उद्योग बाणिज्य सघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठका अनुसार बारम्बार रुपमा ब्यवसायीहरुलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । अरुलाई पनि जोगाउन र आफु पनि जोगिनका लागि स्वास्थ्य सावधानी आवश्यक रहेको छ, श्रेष्ठले भने ।
दमकमा बुधबारदेखि अपरान्ह ४ बजेबाट विहान ८ बजेसम्म निषेधाज्ञा भनिएको छ । यसको पालना पनि पुर्ण रुपमा होला या नहोला भन्ने चिन्ता रहेको छ । दमक उद्योग बाणिज्य संघ लगायतको सुझावको आधारमा नै यो निर्णय लिईएको नगरपालिकाले बताउदै आएको छ ।
दमकमा यसभन्दा अघि पनि लापरवाहीहरु हुँदै आएको थियो । खाद्य लगायतका अत्यआवश्यकीय पसलहरुमा किनमेलका लागि भिड लाग्ने तर स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । अहिले पनिल उस्तै अवस्था रहेको छ ।